Ebumnuche 10 maka Lovehụ Onye Na - eduzi Ọgbọ Aka | Martech Zone
Ọ bụrụ n’inyere nzukọ B2B ọ bụla, ị ga-amata ngwa ngwa na ndị ndu ọgbọ bụ akụkụ dị mkpa nke azụmaahịa. N'ezie:
62% nke ndị ọkachamara B2B kwuru na ịbawanye ogo ndu ha bụ ihe kacha mkpa.
Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe niile mfe n'ịwa ezu na-eduga na-ekwe nkwa a ngwa ngwa nloghachi na ego (ROI) - ma ọ bụ ọ bụla profitability, n'ihi na nke ahụ.
Onye isi 68% nke ulo oru egosiputa mgba na ndu ndu, na ozo 61% nke ndị ahịa B2B na-eche echiche na-eduga n'ọgbọ bụ nsogbu ha kachasị elu.
Nke ahụ bụ ebe ndị ndu na-apụ apụ na-abata, ụzọ ntụgharị uche maka azụmaahịa nke na-ewepụta akara gị ebe ahụ, na-ebelata ụgwọ gị, ma na-ahụ naanị ụzọ ruru eru. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ị ga - eji na - achọ ịchọta ndị na - eduga n'ọgbọ, ma ị na - achọ ịbawanye na ahịa ọhụrụ ma ọ bụ nweta nkwado agbakwunyere maka ndị otu egwuregwu gị.
Anyị na-enweta ya. Anyị arụọla ahịa nke anyị n'ọgbọ na-apụ apụ (anyị na-a drinkingụ champeenu anyị, ọ bụrụ na ịchọrọ!). Nke a bụ 10 nke ihe kachasị amasị anyị mere anyị ji hụ ọpụpụ n'anya na CIENCE na 2021 na otu ụlọ ọrụ gị ga-esi rite uru site na ịtinye obere ma ọ bụ ọtụtụ - ịchụpụ n'ime atụmatụ ọgbọ ndu gị.
Reason 1: Outbound Na-enweta Kasị Direct ROI
N'ihi mgbagwoju anya na ejighi n'aka nke azụmaahịa taa, ọtụtụ ụlọ ọrụ B2B na-ahọrọ ọpụpụ ụzọ ọhụụ iji nweta ROI kachasị ụzọ. Kama ichere nsonaazụ inbound nke nwere ike were 6 ka ọnwa 12 (ma ọ bụ ogologo!) Ala, ị nwere ike nweta ngwa ngwa si enyere ndị ọrụ ọgbọ aka n’ọnọdụ dị ala nke ukwuu.
Chee echiche banyere ya-enwere n'ozuzu oke ntụgharị ntụgharị maka ire ere n'ime (ọnụego afọ ofufo bụ 16%; akwadoro ime njem na-adịkarị elu) ịghara ịkọwa ego ọ ga-eji zụọ ihe siri ike ndi otu ndi otu ndi otu (ndi okacha amara n'onu ha) iji jide n'aka na ROI. Ọ bụrụ n ’ịkwụsị ịtụle ego iji mee atụmatụ nke ọgbọ nke gị, ROI nke Nweta SDR na-aghọ ihe ezi uche dị na ya karị.
Ọpụpụ ndị na - eduga n'èzí kachasị mma na ịchọrọ hyper na-eduga ndị ị chọrọ iji azụmaahịa na. N'iburu eziokwu ahụ na ị nwere ike ịkọwa oge na-emefu ebe a, wee kwuo na mmepụta (na-abụkarị n'ụdị nzukọ a na-eme), enwere mgbakọ na mwepụ doro anya iji chọpụta nlọghachi na ntinye ego. Ọ nwere ike ịbụ usoro kachasị dị ọcha nke ọ bụla ịga-ahịa ọwa ị nwere ike ịmakụ.
Reason 2: Na-abawanye akara ngosi gị
Ndi ị maara na ọtụtụ-azụ ahịa-pasent 80 nke ndị na-azụ (dị ka 2018 Google SERP ọmụmụ) - —nwere ike ịhọrọ akara amara mgbe ị na - achọ ngwaahịa na ntanetị, n'agbanyeghị ma ọ buru ụzọ bịa na nsonaazụ ọchụchọ ahụ?
Omume a agbanweghi na ndapụta B2B. Agbanyeghi na ndi mmadu na amata ihe ugbu a na nyocha ha na ihe omuma ha, imata ihe omuma ka bu ihe di nkpa nke na-enye gi mpi ahu ma na-ewulite iguzosi ike n'ihe di iche iche.
Ọrụ ndị na-eduga n'ọpụpụ na-eduga gị nwere ike ịnye gị ndị ọkachamara mmepe ahịa nwere ike itinye ozi ziri ezi na mpụga ebe ịchọrọ ya-site na mgbasa ozi na oku ekwentị iji zụọ ahịa ahịa na nkwukọrịta n'ịntanetị-iji mee ka akara gị mara na atụmanya gị jikọtara. You're na nnoo na-ọzọ "na-ụsụ" dịkwuo gị ika ikpughe-a akwa-slam ngwọta nke nwere ike iwulite ntụkwasị obi gị ika na-emecha nweta gị mma.
Reason 3: Na-akwado Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Multi-Channel
Dabere na VP nke Ahịa nke CIENCE, Michael Maynes, atụmatụ kachasị mma kachasị mma bụ multi-ọwa otu. Ma na ọtụtụ ọwa dị n'ebe ahụ, olee otu ị ga esi esi mee mkpọsa ọtụtụ ọwa iji nweta ihe ị chọrọ? Ndị azụmahịa na-achọkarị tiketi ọla edo ahụ na-arụ ọrụ. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọtụtụ tiketi ọlaedo iji ruo ndị na-ege gị ntị na karịa?
Usoro nhazi nke outbound multi-channel mkpọsa nwere ike ịbụ aghụghọ-oge-kpụ ọkụ n'ọnụ na akụ-arọ, ị kwesịrị iji nlezianya zubere aghụghọ na orchestration ịga nke ọma ịchọta ndị atụmanya. Nke ahụ bụ ebe atụmatụ ọhụụ nke usoro ọhụụ na-abịa-iji mee ka ibu dị arọ maka gị.
Ọgbọ ndu ga - enyere gị aka iji ọrụ gị ukwuu ezubere iche outbound ọwa ma wuo data site na otutu uzo, wee tinye uzo ohuru iji soro ndi ruru eru. Chọrọ ịkwụsị ichere inbound iji hụ nsonaazụ? Tinye ego na mgbasa ozi ịre ahịa dị iche iche nke na-etinye ike na ha abụọ.
Reason 4: Na-abawanye Inbound Conversions
You maara na ọpụpụ na-ekere oke ọrụ na imechi azụmaahịa inbound? N'ezie, dị ka a 2019 CIENCE ọmụmụ, a dị ịrịba ama 17% nke inbound-emechi amụọ bụ ndị na-outbound aka. Anyị na-akpọ mmetụta a enyemaka na-apụ apụ, ma ọ bụ pasent nke ụzọ mbata (ma ọ bụ ntụgharị mbata mbata) bụ nke ụzọ ọpụpụ zubere na mbụ, dị ka oku ekwentị ma ọ bụ ozi email, nke na-ebute azụmahịa abata-emechi.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ịpụ apụ aghọwo isi ihe na - enye aka na ọnụọgụ na-aga nke ọma n'ihi ihe ndị a:
Gbasaa ndị ahịa banyere ngwaahịa na ọrụ gị
Enwekwu mmata banyere azịza azụmahịa gị na-enye
Na-enye gị ika ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ ikpughe
Adọta ndị ọbịa karịa na webụsaịtị gị
Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka atụmanya n'usoro ịlaghachi azụ na akara gị mgbe ha nọ ahịa maka azịza dịka nke gị (chee na nke a yiri ntughari).
Dị ka ụzọ dị mfe iji bịaruo ebumnuche gị, ụzọ ọpụpụ na-eme ka ohere ntụgharị na nkwado na-eduga.
Reason 5: kpomkwem ezubere iche gị ICP na asịwo Personas
Companieslọ ọrụ B2B kwesịrị iwepụta ezigbo oge na mbido ahịa ahịa na ịre ahịa iji zụlite profaịlụ onye ahịa zuru oke (ICP) ma lekwasịrị onye ọrụ anya. Mana gịnị ma ọ bụrụ na ịnweghị oke akụrụngwa ma ọ bụ na ịnweghị nka iji mepụta ụkpụrụ nduzi iji jikwaa usoro ọgbọ ndu gị?
Site na ịpụta ndị na - eduga ndị ọgbọ, ị nwere ike ime ka usoro nyocha ahụ jiri ndị ọkachamara zụrụ azụ na-eji ọgụgụ isi azụmaahịa wee chọpụta nke kacha mma ICP na onye zụrụ gị. Azụmaahịa gị nwere ike ịmepụta atụmatụ ahịa siri ike dabere na njirisi ndị a:
Ezigbo Profaịlụ Ndị Ahịa (ma ọ bụ ICP)) - Nke a bụ nkọwa zuru oke nke ụlọ ọrụ nwere ike bụrụ onye ahịa gị ọzọ. Kwesịrị ịmepụta ICP a kapịrị ọnụ maka mkpọsa ahịa ọpụpụ ọ bụla iji jiri dị ka ihe nduzi maka ịchọta ndu dị elu.
Asịwo Persona (ma ọ bụ BP) - Nke a na - enyere gị aka ịghọta ndị nwere ike ịzụrụ ahịa ma soro ndị ahụ na - ekwurịta okwu na ọkwa ọ bụla na akwa mmiri gị. Nke a gụnyere ozi gbasara omume ndị gara aga, nke dịnụ, na ndị nwere ike ịre ahịa, akụrụngwa ịzụ ahịa, yana etu esi akpa agwa.
Ndi okacha amara nke ndi ndu n’abia nwere nghota miri emi banyere ndi ahia gi na ndi ha abughi-i gha enweta ndi okacha amara nke gha achoputa data gi nke oma n’ulo oru gi ka ha choro ihe ndi ichoro gha eme.
Reason 6: amata mkpebi ndị na-eme
N'ime usoro ndu ọgbọ, iru ndị na-eme mkpebi bụ ihe kacha mkpa. Ọgbọ ndu dị mma na-achọ ịchọta ma na-agwa ndị ziri ezi okwu, mana olee otu ị ga-esi mara ka esi atụkwasị ha obi ma ọ bụ marakwa ebe ị ga-ahụ ha? Na nkezi ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na a otu ịzụta na 6.8, kedu ihe ga-akachasị ị ga-eme ịghọta onye bụ onye na-elekọta ya:
Ebumnuche ịzụrụ ihe na-aga n'ihu na nzukọ ha
Mmekọrịta azụmahịa na-emechi
SDR nwere ahụmịhe nwere ike ịpụta otu dị iche iche wee mata ndị na-eme mkpebi, yana nka nyocha iji wepụta ụzọ dị mma na ihe ọjọọ. Site n'iji SDRs amalite mkparịta ụka na atụmanya ruru eru, a ga-enwe ike ịhọpụta ndị nwere ike ime mkpebi, iwepu oge ga-emebi nke nwere ike imetụta nrụpụta nke otu gị.
Reason 7: Penetrates New ahịa
Na ahia nke inbound, usoro ndu ndi ndu gi na agbasorita inwe ndi mmadu echere ka ha lee ọdịnaya gi-nke otutu oge na eme ka ị nọrọ niche. Ma site n'èzí, ị nwere ike ịdọta ahịa ọhụrụ na ọbụna nwalee ndị ọhụrụ na usoro ahịa niile.
Ebumnuche nke usoro ọpụpụ nke ọgbọ nwere ike ịrụ oke ọrụ ọ bụghị naanị iru ndị na-ege gị ntị ka ị ga-erute ma nweta ahịa ọhụrụ. Na usuu ndị ọkachamara dị iche iche na-apụ apụ na-eduga ụgwọ ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịgbasa ndu gị gaa na ngosipụta mmadụ ọhụrụ na ọnọdụ ala.
Ọpụpụ dịkwa mma maka ịnwale ahịa ọhụrụ ebe ị nwere ike nweta nzaghachi ozugbo site na ahịa ahụ wee gbanwee. SDR gị nwere ike ịnye nghọta bara uru banyere ihe (na anaghị adị) na-arụ ọrụ na usoro mkpọsa gị.
Reason 8: Na-aga ahịa ngwa ngwa
Inbound, ihe omume, mmekọrịta ọha na eze, onye mmekọ ọwa, mmụba nke ngwaahịa (PLG), ma ọ bụ mmekọrịta ịga ahịa na-eweta ịkparịta ụka n'allntanet niile na-ewe oge. Ọ bụ ezie na atụmatụ ndị ahụ nwere ike ịbụ akụkụ dị ike maka ebumnuche azụmaahịa gị niile, ha na-ewe ogologo oge iji zụlite. Ọpụpụ ọhụụ na-eduga n'ọzọ, n'aka nke ọzọ, kachasị mma na ị na-eduga ndu ndị dị elu nke nwere ike ịdị njikere ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, nke na-enye gị ohere ịga ahịa ngwa ngwa.
Na mgbakwunye, ikike ịzụlite a mbu ebugharị na uche nke mkpebi influencers na lekwasịrị akụkọ bụ n'ezie isi ihe na-ahịa dominance na ezi ahịa na-edu ndú. Tọ ntọala abụọ na akara ngosi maka otu ezigbo ndị na-azụ gị kwesịrị na-eche maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dịka nke gị bụ otu ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi siri dị iche.
Bawanye oke nke ahịa gị na ndị ọzọ na-eduga na-eduga ga-agbakwunyekwu ohere n'ime pipeline ahịa gị, nke ga-atụgharị gaa na azụmahịa ndị emechiri emechi ma mee ka usoro ahịa ahụ dị ngwa. Site na ịpụta ndị na - eduga ndị ọgbọ, ị nwere ike ilekwasị anya na ngwangwa ngwa ahịa na - aga n'ihu nke na - abawanye ahịa ma nwekwa ike ịba ụba.
Reason 9: Setịpụrụ gị Sales Team Up maka Successga nke Ọma
Ihe ịga nke ọma nke otu gị na-adabere kpamkpam na pipeline ahịa dị mma. Site na inye ndi otu SDRs nwere ikike ichota ndi ruru eru, ị nwere ike inye ndi otu ulo ahia gi aka ilekwasi anya na isi ihe ndi ozo. Site n'ịzụlite ndu gị, ịnwere ike ịbawanye ohere ahịa site na mkpokọta 20%, dị ka Ochicho Gen.
Nke a ga emecha mee ka mmekọrịta na ntụkwasị obi dị n’etiti ire ahịa na ịzụ ahịa sikwuo ike. Ọ na - enyere gị aka iwulite ụlọ ọrụ ahịa pụrụ iche karị-nke nwere njikọ chiri anya na ọnụego ntụgharị ka mma-ebe ị nwere ndị isi azụmaahịa lekwasịrị anya na mmechi karịa atụmanya. Ná nkezi, ndị na-ere ahịa ahịa na-emefu naanị 26.6 percent nke oge ha na-ere ndị ahịa (awa 13 kwa izu).
Ọ bụ ezie na ndị otu ọgbọ na-edu ndú na mpụga nwere ike ilekwasị anya na mmepe ụzọ, nhazi oge, na ịchụpụ oyi, otu ndị na-ere ahịa n'ime ụlọ nwere ike iwepụtakwu oge iji gbanwee ndu ndị a dị elu na mmechi mmechi-atụmatụ mmeri maka ndị niile.
Reason 10: Na-ahapụ gị ka ị kpọọ gbaa
Na inbound, ị nwetara ihe ị nwetara, mana na ọpụpụ, ị ga-enweta onye ịchọrọ.
Mantra m. Ndị ụlọ ọrụ na-amalite ịchọpụta na ọpụpụ na-eduga n'ọgbọ bụ n'ezie ụzọ a pụrụ ịdabere na ya ma dị ọnụ ala iji nweta ezigbo nlọghachi na ntinye ego gị ma melite usoro ahịa ahụ. Mana kedu ikike ị nwere mgbe ị na-eduga ndị ọgbọ?
Dị ka ọrụ ndị ọzọ ị nwere ike ịchụpụ, dịka ịmebe weebụsaịtị, mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ ọ bụla (PPC), nke a bụ ebe nyocha gị iji chọta ọrụ nlekọta ọfụma dị ezigbo mkpa. Chọta ọpụpụ ụzọ ọhụụ na-eduga na-apụta na ị ga-enwe ike ijikwa ya dịka ị ga - eme ma ọ bụrụ na SDR nọ ọdụ n'ọfịs gị ma na - arụrụ gị ọrụ.
Site na ụlọ ọrụ ndị na - eduga n'ọpụpụ, ị nwere ike lelee mkpọsa B2B gị niile ma hụ na enwere mmụba nwayọ nwayọ na ogo nke ndu gị. A na-egosi nsonaazụ gị na akụkọ zuru ezu nke edobere megide usoro ị nwere ike nyochaa - ị ga-enwe njikwa zuru oke iji hụ kpọmkwem otu mkpọsa gị si aga ma ọ bụrụ na ndị otu ịga nke ọma na-aga nke ọma (ma ọ bụ daa), ma mee mgbanwe ngwa ngwa ka ọ dịrị gị mma azụmahịa.
Nweta Elele nke Outsourcing Lead Generation
Ọ bụ ezie na ụfọdụ usoro ịre ahịa nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma n'ụlọ, ọrụ ndị ọzọ nwere ike ibute gị isi ọwụwa-na ego-karịa nke ọma, dị ka ịmịpụta ụzọ ọpụpụ, kachasị mma nye ndị ọkachamara SDR nwere ike ime ha nke ọma.
Agakwaghị abata na ndị ahịa, ịchụpụ ndị na-eduga ndị ọgbọ abụrụla akụkụ dị mkpa nke azụmaahịa nwere uru bara uru na nloghachi ahụike. Dịka akụkụ nke usoro ịzụ ahịa agbakwunyere, ị ga-enwe ike iji usoro ọhụụ nke ọpụpụ na-eduga iji ghọta ma bulie ụlọ ọrụ gị nke ọma.
Tinye nzuko na CIENCE
Tags: b2bb2b ahia ahiabponye zụrụ yaikeonye na-eme mkpebiichiezigbo ahịa profaịlụndu genedu ọgbọọpụpụ ndu ọgbọahia n'èzíọpụpụ ndu genẹphe ndu ọphuoutsourcingntọala oge ịre ahịasdrsdr ịchụpụ sdr